ukhe usebenzise indawo efikelelekayo kwi-iphone yakho?
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ngaba ukhe usebenzise uphawu lokuFikelela kwi-iPhone yakho?
Ngaba ukhe usebenzise uphawu lokuFikelela kwi-iPhone yakho?
I-Apple inyanzelise ii-iPhones zayo ezincinci ukuya kwinqanaba elibi xa abantu abaninzi betshintshela inkampu kwi-Android kuba inikezela ngezixhobo ezikhulu. Nangona kunjalo, xa yazisa iifowuni zayo zokuqala ezinkulu ngo-2014- i-iPhone 6 kunye ne-iPhone 6 Plus-iApple isaziva inyanzelekile ukuba ibandakanye inqaku eliza kunceda abasebenzisi ukufikelela kwikona nganye yesikrini nakwezi iPhones zinkulu.
Inqaku kukufikeleleka: cofa kabini kwiqhosha lasekhaya le-iPhone kunye nesiqingatha esingaphezulu kwescreen sakho esihamba sisezantsi kakhulu, sikuvumela ukuba ufikelele kwinxalenye ephezulu yeapps ngesandla esinye ngokulula.
Nangona kunjalo, njengoko abantu abaninzi bekhula beziqhelanisa nezi zinto zikhulu zefom yefowuni, kubonakala ngathi sele kuyinto eqhelekileyo ukuba abantu bajije iifowuni zabo ngesandla kwaye bafikelele kwiindawo eziphezulu zomboniso ngokwenza umthambo wesandla omncinci kunokusebenzisa oko Indlela emfutshane yokufikelela.
Kwaye ukuba nesinqumleli esinqabileyo esihlala into engasetyenziswanga ngabantu abaninzi kubonakala ngathi yinkcitho. Emva kwayo yonke loo nto, khawufane ucinge ukuba unokuyitshisa ikhamera ngokucofa kabini iqhosha lasekhaya, indlela emfutshane esinokuthi nathi siqinisekise ukuba abasebenzisi abaninzi be-iPhone baya kuyithanda. Okanye mhlawumbi unokukhetha ukuseta indlela yakho emfutshane yokwenza isenzo sokucofa kabini?
Nokuba yeyiphi na enokwenzeka, & ampos; okokuqala sinomdla wokufunda ukuba uyayisebenzisa na loo ndlela imfutshane yokufikelela. Vala isandi kwindawo yokuvota kwaye usazise ngeminqweno yakho yempompo ephindwe kabini ye-iPhone ezimfutshane apha ngezantsi.
Ewe, ndiyisebenzisa rhoqo Hayi, soze okanye kunqabe kakhulu Ndinefowuni ye-Android, kodwa mandibone iziphumo!Iziphumo zeVoti yokujongaEwe, ndiyisebenzisa rhoqo 31.46% Hayi, soze okanye kunqabe kakhulu 40.4% Ndinefowuni ye-Android, kodwa mandibone iziphumo! 28.15% Iivoti 906
walmart ngolwesiHlanu ngeeselfowuni
zingaphi ii-transistors kwi-iphone
Eyona AT & T ihlawulwa kwangaphambili kunye nezicwangciso ezihlawulelwa kwangaphambili
Idili: I-Samsung kunye neapos ye-Gear Fit 2 Pro band band isele i-15% icinyiwe kwiAmazon
UHarman Kardon Onyx Studio uphononongo
I-Samsung Galaxy Note 20 vs Galaxy Note 10: idabi lamaNqaku “atshiphu”
Ngubani udumo lwedoppelganger yakho? Le app iza kukuxelela nangona kukho iiflegi ezibomvu
I-T-Mobile inokuthi iphumelele emfazweni i-US 5G ngaphambi kokuba iApple kunye neapos ye-iPhone 12 ikhutshwe
I-DEAL: Thenga i-128GB iMicrosoft Surface Pro 4 nge-Intel Core m3 yeedola ezingama-749
I-AT & T iya kwiVerizon & apos; jugular ngesibulali esitsha seNgcaciso yeDatha kunye nesaphulelo esihlawulelwa kwangaphambili
Imixholo ye-Samsung Galaxy S6 hit hit 6 million downloads
IJet Black iPhone 7 Plus ngoku ukuhambisa ngoDisemba, kodwa ungayifumana kwivenkile zentengiso